(Collared Scops Owl)
ဇီဝ‌ဗေဒအလိုအရ တောလုံငှက် (Collared Scops Owl) သည် ‘စတြစ်ဂျီ‌ဖောမီး’မျိုးစဉ် တွင်၎င်း၊ ‘စတြစ်ဂျီဒီး’မျိုးရင်းတွင်၎င်း ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်ဝက်‌ခြောက်‌ကောင် အမည်ဖြင့် လူသိများသည်။ အလျား ၈ လက်မခန့်ရှိ၍ နားရွက်‌မွှေးများပါရှိသည်။ တောလုံငှက်၏ အရောင်မှာ မွဲပြာရင့်‌ရောင် သို့မဟုတ် နီညိုရောင်ဖြစ်သည်။ တောတွင်း၌ ကျက်စား‌သော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။‌
မှောင်စပျိုးသည့်အခါ တောလုံငှက်သည် “ကြက်ဝက်‌ခြောက်ကောင်” ဟု ထပ်တစ်လဲလဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ‌အော်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအသံကို တောင်‌ခြေရင်းရှိ ကျွန်း‌တောအတွင်း၌ တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြားရတတ်သည်။ သို့‌သော် မိုးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီ၌ အသံစဉ်အတိုင်း အပြည့်အစုံ မအော်‌ချေ။ နွေရာသီ၌မူ တောလုံငှက်၏အော်သံကို ကြက်ဝက်‌ခြောက်‌ကောင်ဟု အပြည့်အစုံ အဆက်မပြတ်ကြားရသည့်ပြင်‌နေ့အခါ၌ပင် တစ်ခါတစ်ရံ ကြားရသေး၏။
တောလုံငှက်သည် ကျွန်း‌တောများ၌သာ ကျက်စား‌လေ့ရှိသည်။ ထူထပ်စွာ‌ပေါက်‌သော အရွက်တို့၏အကြား၌ နေ့အခါ တွင် ပုန်းလျှိုးအိပ်‌နေတတ်သဖြင့် တွေ့ရခဲသည်။ ညအခါ၌သာ ထွက်လာတတ်သည်။ ယင်း၏အစာမှာ ပိုးဖလံ၊ ချေးထိုးပိုး၊ တိရစ္ဆာန်ငယ်များနှင့် ငှက်ငယ်များဖြစ်သည်။ ဖေ‌ဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ တောလုံငှက်များ သား‌ပေါက်ကြသည်။ မေလနှင့် ဇွန်လတွင် ဒုတိယအကြိမ် သား‌ပေါက်ပြန်သည်။ ဥများကို သစ်‌ခေါင်းထဲ၌ ဥအုလေ့ရှိသည်။ တစ်မြုံလျှင် ၃ ဥမှ ၄ ဥထိ ရှိတတ်သည်။ ဥသည် ခပ်လုံး⁠လုံးဖြစ်၍ ဥခွံမှာ နူးညံ့‌ချောမွတ် သည်။ တောလုံငှက်ကို အရှေ့နိုင်ငံများတွင် အနှံ့အပြား‌တွေ့ရသည်။ အနောက်ဘက် ဟိမဝန္တာ‌တောင်အထိ ယင်းကို တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သစ်‌တောများတွင် အမြဲ‌တွေ့ရသော ငှက်မျိုးဖြစ် သည်။ ပေ ၆၀⁠၀၀ အမြင့်ထိ နေနိုင်သည်။
↑ BirdLife International (2017). "Otus lettia (amended version of 2016 assessment)". IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T61855318A118498941.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောလုံငှက်&oldid=720749" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။